Pictures of mafekitari
TFS, rinomiririra boka mafekitari muna China, kusanganisira chigaro & chinoumba zvikamu vagadziri, kunobereka yakafara mutsetse zvigaro akakodzera ose Motor Vehicle, kusanganisira nematarakita anofamba, Agricultural, Construction, Industrial, Lawn & Garden, Professional Turf, uye Magetsi midziyo mafomu. The chigaro mutsetse zvinosanganisira marudzi mazhinji dzakakurumbira zvigaro uyewo mamwe ano chigaro mazano pamwe nemamwe pakuonekwa uye zvinhu
A simba hwokugadzira chikwata vakashanda kwemakore 20 chigaro kugadzirwa nhoroondo, zvichiita ichangobva chigaro magadzirirwo uye panguva iyoyowo kuramba vanokudza kugadzirwa vanokwanisa. Nhasi nemhando zvitatu dzaFord nokuda inopupuma, kunyanya zvinoratidzwa zvemichina paakamedura kuburikidza ne rakaumbwa jira akatsigira raive nebutiro iyo rinoshandisirwa kuti zvigaro dzakakwirira kirasi. The dzaFord anosanganisirawo kwakakwana kubudiswa pazvigaro, akadai, machine, tsika, uyewo Welding, kupenda, gungano. Kunze yekunwa, tooling chinoitwa matiri, ine guru tsikwa, mapurasitiki & furo anoumba.
The zvigadzirwa Export kuUnited States, Japan nedzimwe nyika, panguva iyoyo basa pamwe mudzimba huru okurima michina michina makambani.
zvigaro yedu zvikuru kushandiswa mune zvokurima, kuvaka, maindasitiri, patsangadzi & bindu, latest magadzirirwo anoenderana akanaka-akatarira, vakasununguka, kuchengeteka uye withstanding nezuva zvisizvo uye mamiriro dzezvakatipoteredza noutsinye.
fekitari redu certificated ISO9001 zvaanoda, uye CE chitupa, nechokwadi zvigaro zvedu vanochengetedza kupindirana unhu akabvunza ne OEMs.
Achiedza yezvirwere anogona kusangana kuidzwa kuti zvigaro, kusanganisira simba, kubvambura, munyu pfapfaidzo, UV, flammability, abrasion, durometer vachiidza, etc.
Kana uri kutsvaka hwakavimbika uye unhu nokutengesa, kana kuziva rimwe zvinhu zvedu, tapota nyorera chikwata chedu kusangana zvaunoda.
Top Factory nokutengesa
10 Oct. 2019 New CNC kudzorwa azvikuya muchini pehata anopinda workshop.CNC wedu akavandudzika zvikuru chigadzirwa kukura kugona uye kukura nokukurumidza, kubatsira kukura akaitwa 02 Mbudzi 2019 T ...
VIP Passenger Seat , Rear Seat , Universal Seat Slide Rail , Anti-kutedzemuka Gun Aiming Seat , Folding Seat , Hardware Torsion Metal Wire okusungisa ,